February 2020 - Myitter
February 29, 2020 Myitter 0
အားလုံးပဲ ထီပေါက် ကံထူး နိုင်ကြပါစေ…ထီပေါက်စေသော နည်းလမ်းများ… ထီပေါက်စေနိုင်သော နည်းလမ်းများ မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား ယက္ကန်းစင်တောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သိဒ္ဓိအောင် ပုတီးစိပ်နည်း (၁) သိဒ္ဓိ ဘဂဝါ အရဟံ ၊ဗုဒ္ဓေါ မေ သတ္တပါကာရံ ၊ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ (၂) […]
မနေ့ တည်းက တင်မယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပိပိရိရိလာလိမ်တဲ့ကိစ္စလေး …
မနေ့ တည်းက တင်မယ် ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပိပိရိရိလာလိမ်တဲ့ကိစ္စလေး အခုမှအားလို့ တင်ပါပြီရှင့်။လွန်ခဲ့တဲ့ တနလာင်္န့မနက်8နာရီခွဲလောက်က စပယ့်ကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်လာ Addတယ်။ မင်နရယ်fri မရှိပေမယ့် သူ့ profileကယူနီဖောင်းနဲ့ ဆိုတော့ လက်ခံဖြစ်လိုက်ပါတယ်ရှင့်။ခဏကြာတော့ သူ့ ဘက်ကမိတ်ဆက်လာပါတယ်။ သူ ကလန်ဒန်မှာနေကြောင်း သူ […]
” ထီထိုးထားသူများ ထီပေါက်စေမဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ”
ပရိသတ်ကြီးရေ မနက်ဖြန် ထီထွက်ပြီနော်…ဒါကြောင့် ထီပေါက်စေတဲ့ ဂါထာလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်…ရှေးကျမ်းရင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာကို မဖော်ပြမီမှာအရင်ဆုံး ထီပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သီလကို ဆောက်တည်ရပါလိမ့်မယ်။ ဂါထာမန္တန်တွေရဲ့ အစွမ်းဆိုတာရွတ်ဖတ်နိုင်မှုအစွမ်း၊ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စိတ်စွမ်းအားတို့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး အစွမ်းထက်မြက်မှုက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူဘဲ ပိုနိုင်၊ လျှော့နိုင်တာ ရှိပါတယ်။ […]
ည အိပ်ယာဝင် (၇) ခေါက် ရွတ်ပြီးအိပ်က လောကီအစီအရင် စုန်း နတ် ပယောဂ ကင်းစေသည့် ဂါထာတော်
ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး ဝန်ထမ်းတွေကို ဘောနပ်စ်ပေးပြီး နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ လစာလျှော့ယူမည်
တစ်သက်မှာ တစ်ခါဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အံတော်
တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဖူးမြှော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ကို ဖူးလိုက်ပါ ကံထူးလို့ ဖျာပုံသူဖျာပုံသားများနှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးချိန်တန် ဖူးထိုက်လို့.ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။ ကျွန်တော် ကလေးဘဝတည်းက ဘိုးဘိုး ၊ဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက်ကတည်းက ဖျာပုံမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား အံတော်နှင့် ဆံတော်တစ်ဆူ ကိမ်းဝပ်နေတယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ် ရှေးဟောင်း […]
ချန်ပီယံဘွဲ့ကာကွယ်ပွဲအတွက်ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရ်ှကို မှောက်အောင် ထိုးသွားမယ်လို့ အောင်လအန်ဆန်းကြုံးဝါး
ပရိသတ်ကြီးရေ လာမယ့် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရ်ှတို့ရဲ့ ONE Championship ပွဲစဉ်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမှာ ပြုလုပ်သွားမှာပါ…. အောင်လအန်ဆန်းဟာ ဝိတ်တန်း ၂ ခုရဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ခုသူ့ရဲ့ သူ့ရဲ့မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံဘွဲ့ကို ဘစ်ဒက်ရ်ှက စိန်ခေါ်တာကြောင့် […]
မော်လမြိုင်မြို့ဟာ အေးချမ်းသာယာတဲ့ မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပြီး တန်ခိုးကြီး ဘုရားတွေများပြား တည်ရှိရာ ဒေသ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေထဲက စေတီတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ ဦးဇိနစေတီတော်ဟာ မော်လမြိုင်မြို့ အရှေ့ဖက် တောင်ရိုးပေါ်မှာ တည်ရှိတဲ့ စေတီတော်တစ်ဆူ ဖြစ်ပါတယ်…. စေတီတော်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဆိုရမယ်ဆိုရင် ရှေးမြန်မာမင်းများ လက်ထက်က မော်လမြိုင် (ရမ္မာဝတီ) […]
သိန်းတစ်သောင်း ကံထူးရှင်မိသားစု၏ ရှင်ပြု နားသ အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီး
သိန်းတစ်သောင်း ကံထူးရှင်မိသားစု၏ ရှင်ပြု နားသ အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီး စိုင်းဆန်းညွန့် ၊ ဇနီးက မဆွေဇင်လတ်တို့ဟာ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ဘဝအခြေအနေမှာ ခေတ်ကပြောင်းလဲလာတော့ အိမ်ဆောက်ရာမှာ လက်သမားတွေအလုပ်မဖြစ်တော့တဲ့ အချိန်၊သံနဲ့ဆောက်တဲ့ခေတ်မို့ အလုပ်မရှိနေချိန်ကလေးက ၂ယောက်အလုပ်ပြောင်းပြီးဆေးသုတ်တဲ့အလုပ်ကို ပြောင်းလုပ်ခဲ့သည်။ ဦးလေးဗေဒင်ဆရာပုဏ္ဏားကြီးက မင်းတို့ကံကောင်းနေတယ် ထီထိုးဖို့မမေ့နဲ့ဆိုတဲ့ မကြာမကြာပြောတဲ့စကားရှိသည်။ တစ်နေ့ မိသားစုလိုက် မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးကို […]